Upload | Register | Login
ဇာတ်ကားများကို ရှာဖွေရန်: အမည် ( မင်းသား|မင်းသမီး | ဒါရိုက်တာ| ဇာတ်ကား )
ပညာပေး ( 1 )
ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း ( 1 )
လူသတ်ကား (6)
သီချင်း ( 1 )
သဘာဝအန္တရာယ် (2)
သဲထိတ်ရင်ဖို ( 29 )
စိတ်ကူးယဉ် ( 15 )
ဟာသ ( 12 )
ကာတွန်း (9)
သိပ္ပံ ( 10 )
ရာဇ၀င်/သိုင်း ( 14 )
မှတ်တမ်း ( 11 )
အက်ရှင် ( 30 )
စစ်ကား (5)
သရဲ (3)
တစ္ဆေ (3)
အချစ် ( 33 )
မှော် (3)
သတင်းထောက်ကို မြိုလိုက်သော စပါယ်ကြီးမြွေ
ရုရှားရေငုတ်သမား ကံမကောင်းစွာ အန်းခ်ငါးကြီးတစ်ကောင်ကိုက်ခံရပုံ
နှူးကလီးယားဓါတ်ပေါင်းဖို ယိုစိမ့်မှုကြောင့်ဖြစ်လာသော နောက်ဆက်တွဲ
Iron Man ဇာတ်ကားထဲက ဖိနပ်ပျံ
Tippiငယ်စဉ်က တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ဖြင့် ၁၀နှစ်လုံးလုံးနေခဲ့သူ
25နှစ်ရှိ အသက်ကယ်ဝန်ထမ်းလေး Toby Loganတွင် လူများမ...
ရွာသူလေးတစ်ယောက် ရှန်ဟိုင်းမြို့ကြီးကိုရောက်တော့ အ...
၂၀၀၈ခုနှစ် ရုရှာနှင့် Georgia များကြား စစ်(၅)ရက်လ...
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)လောက်က ဂြိုလ်သားTAKENသည်...
အဖြေရှာရခဲတဲ့ပုဒ်စာ၊ အဖြေမရှိတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ အြေ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းသည် 2176ခုနှစ် မာစ်ဂြိုလ်ပေါ်တွင် ဖြ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းက အမေရိကန် 16နှစ်ကြာ ကားမောင်းလုပ်က...
ကမ္ဘာပေါ်တွင် မထင်မှတ်ပဲ မာစ်ဂြိုလ်ကကလေးငယ် တစ်ယောက်...
ငါလဲကျိုးလျှင် မင်းလဲကန်းစေဆိုသလို အမေရိကန်ဖြစ် အန...
သာမန်လူသားတဖွဲ့ကိုခေါ်ပြီး လူသားတွေအတွက် စမ်းသပ်မှုတ...
Tags: Actor :Actress :Director :Genres: အချစ်,စိတ်ကူးယဉ်,ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း, 2009
ဤဖြစ်ရပ်သည် Euထိန်းချုပ်မှုအောက်၏ Sloveniaအကြောင်း Alexandraသည် Ljubljanaမြို့ရှိ ကျေးလက်လေးတခုတွင် ထက်မြတ်သော ချောမောသော ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်သည် သူစိတ်ကူးထဲမှာ သူသည် လောကကြီးကို သူတစ်ယောက်တည်းဖြင့် ပြောင်းလဲပစ်ချင်နေသ...
Read More0Comment ကြည့် (1063)
ငယ်စဉ်က ပျောက်ရှခဲ့တဲ့ “ဘုံ”
Tags: Actor :Yi Wang,Actress : Yi-huan Zhao,Director :Genres: အချစ်, 2011
90နောက်(1990ခုနှစ် နောက်မွေးဖွားသူကိုဆို) တွေ သူတို့၏ သံယောဇဉ် မေတ္တာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြသပုံ၊ သူတို့၏ သံသရာတွေကို အကဇာတ်တပုဒ်လို ရေးဖွဲတီကုံးထား . . . တယောက်က စင်္ကာပူမှာကျောင်းပြီးတယ် တစ်ယောက်က ပီကင်းက အနုပညာကျောင်း...
Read More0Comment ကြည့် (351)
Tags: Actor :Actress : Susanne Lothar, Ekateryna Rak,Director :Genres: အချစ်, 2007
ဇာတ်ကားအကျဉ်းကို ရိုက်တင်ဆက်တဲ့ဒါရိုက်တာက နှစ်ပွင့်ဆိုင်အရာများကို ယူကာတည်ဆောက်ထားသည်။ ၀ူးခဲ့လန်ရှိ မိခင်တစ်ယောက်သည် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဘ၀မျိုးကိုရရှိအောင် အောက်တာလီပြည်နယ်တွင်ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခဲ့သည် . . . နဂိုကတည်းက အောက်...
Read More0Comment ကြည့် (258)
Tags: Actor :Luke Newberry ,Actress :Director :Genres: တစ္ဆေ,သဲထိတ်ရင်ဖို, 2013
တကမ္ဘာလုံး ဖုတ်ကောင်ရှင်သန်ခဲ့သည်မှာ လေးနှစ်ပင်ကြာခဲ့ပြီနောက် လူသားများသည် သေပြီးပြန်ရှင်သန်လာသော ဖုတ်ကောင်များကို လူလောကနှင့် မိတ်ဆွေများ အနားသို့ပြန်လည်နေရာ ရစေရန် စမ်းသတ်ခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းအဓိကကို Kieren Walkerဆိုတဲ့ ဖုတ...
Read More0Comment ကြည့် (251)
Tags: Actor :Actress :Director :Genres: ရာဇ၀င်/သိုင်း,ကာတွန်း, 2008
ဤဇာတ်ကားသည် လူငယ်များကိုအကျိုးပြုစေသည်။ ဇာတ်ရိုးလေးမှာ ကောင်းသော သမိုင်းနောက်ခံနှင့် တကယ်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အဖြစ်ကို ရေးဆွဲတင်ဆက်ထား . . .
Read More0Comment ကြည့် (249)
Tags: Actor :Actress : Katharine Isabelle, Lisa Ray,Director :Genres: အက်ရှင်,သဲထိတ်ရင်ဖို, 2011
Arkady Balaganစုံထောက်ကြီး（Shawn Doyle）သည် အရင်က ကမ္ဘာ့ချပ်(ကျားကွက်)ချန်ပီးယံကြီးဖြစ်သည်။ သူဇနီးလောင်း အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့နောက်ပိုင်း ကြောက်တတ်သော ကြောက်စိတ်ဝင်နေတဲ့စိတ်ရောဂါတခုကြောင့် အိမ်ပြင်မထွက်ရဲပဲဖြစ်နေလေသည်။ အပြင်နှင်...
Read More0Comment ကြည့် (242)
Tags: Actor :Andre Braugher,Scott Speedman,Bruce Davison,Actress : Autumn Reeser, Dichen Lachman, Camille De Pazzis,Director :Genres: စစ်ကား,အက်ရှင်,သဲထိတ်ရင်ဖို, 2012
ငါလဲကျိုးလျှင် မင်းလဲကန်းစေဆိုသလို အမေရိကန်ဖြစ် အနာဂတ်ဖြစ်လာနိုင်မယ့် ဒဏ်ရာပေါင်းများစွာရနေချိန်မှာ ရေငုတ်သင်္ဘောတပ်တခုမှ အပစ်မဲ့လူသားကို မသတ်ပဲ တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တစင်း ပစ်လွတ်ခဲ့မှာကို တပ်မိန့်ကိုလွန်ဆန်ပြီး မြောက်ဝင်ရိုးစ...
Read More0Comment ကြည့် (224)
Tags: Actor :Actress :Director :Genres: ကာတွန်း,ဟာသ,စိတ်ကူးယဉ်, 1975
အဖြစ်အပျက်ကတော့ ကြာခဲ့ပြီ၊ အိမ်ရှေ့မင်းသားလေးဖြစ်တဲ့ “ယီရှိုး”သည် မိခင်နှင့်ခွဲခွာပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတကျောင်းတွင် ကိုရင်ဝတ်ကာနေခဲ့သည်။ ဉာဏ်ရည်ထက်မြတ်သောကြောင့် ရပ်ရွာရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ရွာသားများ၏ ပြဿပေါင်းစုံကို ဖြေ...
Read More0Comment ကြည့် (223)
ဓါတ်လုံး( ၇ )လုံး
Tags: Actor :James Marsters,Yun-Fat Chow,Joon Park,Justin Chatwin,Ernie Hudson,Luis Arrieta,Actress : Eriko Tamura, Jamie Chung, Emmy Rossum,Director :Genres: မှော်,အချစ်,အက်ရှင်,ရာဇ၀င်/သိုင်း,သဲထိတ်ရင်ဖို, 2009
ဤဇာတ်လမ်းသည် ဂျပန်ကာတွန်းရုပ်ပြမှ ပြုပြင်ရိုက်ကူးထားသည်။ ဓါတ်လုံး (၇)လုံးသည် ဂြိုလ်တခုမှ ကျိမ်စာတိုက်ပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်သို့ စေလွတ်ခဲ့သည်။ ထိုဓါတ်လုံး(၇)လုံး ရရှိပါက လိုရာဆုတောင်းပြည့်သူဟု ဆိုရိုးလည်းရှိခဲ့သည်။ ထိုဆိုရ...
Read More0Comment ကြည့် (210)
Tags: Actor :Patrick Flueger,Chad Faust ,Mahershalalhashbaz Ali,Garret Dillahunt,Tim DeKay,Ian Tracey,Brennan Elliott,Actress : Lindy Booth, Lexa Doig, Alexia Fast, Summer Glau, Jacqueline McKenzie, Samantha Ferris, 梅歌林·艾奇坤沃克 Megalyn Echikunwoke,Director :Genres: အချစ်,စစ်ကား,အက်ရှင်,သဲထိတ်ရင်ဖို, 2004
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)လောက်က ဂြိုလ်သားTAKENသည် လူပေါင်းများစွာကို ဖမ်းယူခဲ့လေသည်။ 2004 ခုနှစ် 7လပိုင်း အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး အရှိန်ဖြင့် ကြွေကျလာသောဥက္ကာခဲတခုသည် ကမ္ဘာကိုဦးတည်လာနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့လေသည်။ ကမ္ဘာလူသားအတွက် လံ...
Read More0Comment ကြည့် (206)
Tags: Actor :Jet Li,Jason Statham,James Morrison,Actress : Carla Gugino ,Director :Genres: အက်ရှင်,သိပ္ပံ,စိတ်ကူးယဉ်,လူသတ်ကား, 2001
ဇာတ်လမ်းက ဝေးလွန်းတဲ့ ကမ္ဘာတခုမှာ Gabe, YouLan ( ဂျက်လီ )တွင် သာမန် လူသားတယောက်ဖြစ်သည်။ သူတွင် ချစ်ရသော ဇနှီးတစ်ယောက်နှင့် ခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိသည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်း သာယာသည်။ ဒါပေမယ့် တနေ့ မမျှော်လင့်သော အန္တရာယ်လည်း သူထံ ကျ...
Read More0Comment ကြည့် (200)
Tags: Actor :Jackie Chan,Stephen Chow,Daniel Wu,Richie Ren,Actress : Annie Wu, Asuka Higuchi, Maggie Cheung1, Hsu Chi,Director :Genres: အချစ်,အက်ရှင်,ဟာသ, 1999
ကမ်းခြေတွင် လမ်းလျှောက်ရင် စာရေးထားပြီး ပိတ်ထားသော ပုလင်းတလုံးကိုတွေ့လိုက်သည်က အစပျိုးသည်။ သူကောက်ရသော ပုလင်းသည် အထီးကျန်သေကောင်းလေးတစ်ယောက်မှ ရေးသားမျှော်ခဲ့သော ပုလင်းဖြစ်သည်။ စာတွင် “ငါအထီးကျန်နေတယ် မင်းကော . . .”လို့...
Read More0Comment ကြည့် (173)
Home | Movie | Video Share | Songs | News | Mall
Copyright © 2013 Future Team Co.ltd All Rights Reserved. | Powered by FutureTeam Co.ltd